ချစ်ကြည်အေး: Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်-၁
ခရီးသွားပိုစ့် မတင်ခင် ကျမရဲ့ တောရိုက် တောင်ရိုက် ပုံလေးတွေ အရင် ကြည့်ကြပါအုံးလေ။ ကျမတို့က ဒီတခေါက် Tour Guide နဲ့ သွားတာ မဟုတ်ပဲ ခင်ရာမင်ရာ ဒေသခံမိတ်ဆွေတွေနဲ့ သွားတာမို့ တချို့ အချက်အလက်တွေ Wikiထဲ ပြန်ရှာ ချင်ပါသေးတယ်။
ဆီဘူးမြို့က တောင်တွေ၊ ပင်လယ်တွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ လှပတဲ့ ကျွန်းမြို့ကလေး တမြို့ပါ။ မြို့တော်မနီလာလို တနှစ်ကို တိုင်ဖုန်း ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်း တိုက်ခတ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်တဲ့၊ သဘာဝ ဘေးအန္တာရာယ်တွေ ကင်းရှင်းတဲ့ ကျွန်းမြို့ကလေးမို့ ကံကောင်းတဲ့ မြို့ကလေးပါပဲ။ ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်က မနီလာမြို့ကြီးကို Favorite of Typhoon လို့ ကျီစယ် ခေါ်ဝေါ် လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဆီဘူးရဲ့ အနီးအနား ဘိုဟိုးလ်-Bohol လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်းမြို့ကလေးကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီ့ ကျွန်း ၂ ကျွန်းပေါ်က တွေ့သမျှ၊ မြင်သမျှ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ လက်လှမ်းမီသမျှ ပန်းတွေကို သိမ်းကြုံးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Flowers of Cebu and Bohol လို့သာ ဆိုကြပါစို့....။
ဒီပိုစ့်ကိုတော့ ကဇာတ်တွေ၊ အငြိမ့်ပွဲတွေမှာ မင်းသမီးမထွက်ခင် ရှေ့ထွက်မင်းသမီးလေးတွေ အရင်ထွက်ပြီး ဖျော်ဖြေ အသုံးတော်ခံသလိုပဲ လို့ သဘောထား ကြည့်ရှူပေးကြပါနော်....:)
မောင် လေး Wed Jul 21, 08:10:00 PM GMT+8
မောင်မောင် Wed Jul 21, 08:31:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေး ပန်းလေးတွေ က လှလိုက်တာဗျာ။
ကင်မရာ အကောင်းစား နဲ့ဆိုတော့လဲ ကြွားတယ်ပေါ့လေ။ :)
Anonymous Wed Jul 21, 08:48:00 PM GMT+8
ပုံတွေ ကတော့ တကယ့်ကို ကောင်းပါပေတယ် နောက်ထပ် လည်း ဖတ်ဘို့ စောင့်နေမယ်နော်
ချိုကျ Wed Jul 21, 08:59:00 PM GMT+8
ရှေ့ထွက်မင်းသမီးတွေတော့ ပြီးသွားပြီ အစ်မရေ...နောက်ထွက်ကလေးမြန်မြန်လုပ်ပါဗျို့ :)
Anonymous Wed Jul 21, 09:39:00 PM GMT+8
အားပါးပါး လှတယ်ဗျာ အမကြီးချစ်နဲ့တူတယ်
မုန့်များများ ၀ယ်ခဲ့နော် နောက်ထပ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း ဇာတ်လမ်းလေးတွေ လေး မျှော်နေမယ်
Cameron Wed Jul 21, 10:04:00 PM GMT+8
ကင်မရာကလဲကောင်း ပန်းကလေးတွေကလဲလှ ရိုက်တဲ့သူကလဲတော်..။
ဖို့ကပ်စ်ယူထားတာကောင်းတော့ ပန်းလေးတွေအလှက ပိုကြွသွားတယ်..။“
သက်ဝေ Wed Jul 21, 10:15:00 PM GMT+8
ဝယ်လာတဲ့ မုန့်က ဘယ်တော့ စားရမှာလဲ...း))
Shinlay Wed Jul 21, 10:30:00 PM GMT+8
pandora Wed Jul 21, 11:01:00 PM GMT+8
ပန်းပုံလေးတွေ သိပ်ကြိုက်တယ်။ တပွင့်ချင်းထက် အများကြီးပွင့်နေတဲ့ ပန်းခင်းပုံလေးတွေကို ပိုနှစ်သက်မိတယ်။ ရိုက်ထားတာ လှမှလှ. :)
ယွန်း Thu Jul 22, 12:40:00 AM GMT+8
စိတ်ကို ကြည်နူး သွားစေတယ် အစ်မချစ်ရေ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Jul 22, 01:39:00 AM GMT+8
Moe Cho Thinn Thu Jul 22, 06:07:00 AM GMT+8
စပယ်လို ဖြူဖြူ သေးသေး အပွင့်လေးတွေကို ချစ်တယ်။
အင်ကြင်းသန့် Thu Jul 22, 09:11:00 AM GMT+8
ရှေ့ထွက်မင်းသမီးလေးတွေကလည်း လှတာပါပဲ :))
စန္ဒကူး Thu Jul 22, 09:43:00 AM GMT+8
မမချစ်ကြည်ရေ.. နှစ်စပိုင်းတုန်းက ရောက်ခဲ့တယ်..
Gay လိပ်ပြာရော..း)))
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ Thu Jul 22, 10:20:00 AM GMT+8
မမချစ်ရေ ပန်းတွေ အားလုံး လှမှ လှပဲ....ကစ်စမီပန်းလေးတွေကို တွေ့တော့ မေမေနဲ့ ယောက္ခမမေမေရဲ့ ကစ်စမီလေးတွေကို သတိရသွားတယ်... တပွင့်တည်းသော အဝါရောင်ပန်းလေးကိုလဲ ကြိုက်တယ်
မမချစ်ရဲ့ ခရီးသွားအတွေ့ကြုံလေးတွေ မျှော်နေမယ်နော်...
An Asian Tour Operator Thu Jul 22, 10:36:00 AM GMT+8
ရှေ့ထွက်မင်းသမီး ပြီးရင် နှစ်ပါးသွား လား အစ်မ။
Anonymous Thu Jul 22, 11:28:00 AM GMT+8
တင်ထားတဲ့ ပန်းလေးတွေလိုပဲ လှတဲ့ အစ်မချစ်ကြည် (ဖားတာ ဟဲ)... ဒီတစ်ခေါက် ဖိလစ်ပိုင်ခရီးစဉ်မှာတော့ စုံတွဲပုံတင်ရမယ်...ဒါပဲ...:)
မောင်မိုး Thu Jul 22, 02:12:00 PM GMT+8
ဆီဘူးက ပန်းတွေပေါ့လေ..။ တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ။ နောက်ပို့စ်တွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ..။ ပြန်လာရင် တစ်လုံးလောက် ဆွဲလာခဲ့ဦးနော်။
နွေဆူးလင်္ကာ Thu Jul 22, 04:26:00 PM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Thu Jul 22, 08:18:00 PM GMT+8
ဒီတစ်ခါတော့ ဘလော့ဂါပီသစွာ ကင်မလာကြီးနဲ့ သွားခဲ့တယ်ပေါ့လေ။း))
TZA Thu Jul 22, 09:08:00 PM GMT+8
အသုံးတော်ခံတယ်သာပြောတာ၊ သုံးလည်းမသုံးလိုက်ရပါဘူး အစ်မရာ (ဟမ်)
ကိုဇော် Fri Jul 23, 01:20:00 AM GMT+8
လှပါ့. . .